Pride of de Kaap - Izimbali - Iningizimu Afrika
Zinezici ezimbili ezinama-lobed noma aphiko ezinamaphiko anama-60 mm ububanzi. Isikhathi esikhulu sokubhakabhaka singakaMashi no-Ephreli, kodwa izitshalo zingase zivele ziqhakaze kusukela ngoNovemba. Imibala yezimbali ngokuvamile ivela ku-saumoni kuya e-orange futhi ephuzi ibe mhlophe. Amagundane afana ne-oar futhi abe nobude obungama-40 mm.
I-Bauhinia galpinii ingatholakala itholakala ezindaweni ezihlala emaphandleni.
I-pod eeqinile, enjengokhuni, iqukethe imbewu encane.
Naphezu kwegama layo elibonisa ukuthi litholakala esifundeni saseKapa eNingizimu Afrika, lesi sitshalo empeleni sisuka ezifundeni ezifudumele zezwe. Ibizwa ngokuthi iDe Kaap Valley esifundazweni saseMpumalanga ngaseMbombela [eNelspruit].
Lesi sitshalo sande ezindaweni eziqhamuka zaseNingizimu Afrika futhi, ngenxa yobuhle bayo nokulula kokulima, manje sekutholakala emhlabeni wonke. Kuyaziwa ngesiBhunu njengoVlam van die Vlakte okusho 'amalangabi emathafeni'.